ချင်းပြည်နယ် အခြေစိုက် နအဖစစ်တပ်အတွင်း ကလေးစစ် သား အသုံးပြုမှုရှိနေ |
« ချင်းပြည်နယ် ဗျူဟားမှူးက ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များထံ အလှူငွေများထည့်ဝင်၊ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်ခြင်းလော
ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီက ချင်းပြည်နယ်တွင် ပါတီရုံး ခွဲများ ဖွင့်ရန် ပြင်ဆင် »
ချင်းပြည်နယ် အခြေစိုက် နအဖစစ်တပ်အတွင်း ကလေးစစ် သား အသုံးပြုမှုရှိနေ
၇ ဇွန်လ ၂၀၁၀၊ (ဟားခါး) – ချင်းပြည်နယ်အထက်ပိုင်း ဖလမ်းမြို.အခြေစိုက် ခလရ (၂၆၈) တပ်ရင်းလက် အောက်တွင် အသက်မပြည့်သေးဘဲ စစ်မှု ထမ်းဆောင်နေသည့် ကလေး စစ်သားများ ရှိသည် ဟုစုံစမ်းသိရှိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို.နယ် ပျဉ်းတောဦးကျေးရွာသား အသက် (၁၆)နှစ်အရွယ် မောင် သက်လွင်သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းက ကလေးမြို. စုစောင်းရေး တပ်မှ စစ်သားတဦးက မြူဆွယ်စည်းရုံးကာ တပ်ထဲသို.အသွင်းခံခဲ့ရကြောင်းမောင်သက်လွင်ကပြော သည်။
“ကျနော်လည်း အိမ်နှင့်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ကျနော်သူတို့ခေါ်တာကိုလက်ခံခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် အခု ကျနော် နောင်တရတယ်။ တပ်ကနေ ဘယ်လိုမှထွက်လို့ မရတော့ဘူးဖြစ် နေတယ်၊ အိမ်ကလည်း ကျနော့်သင်တန်းကာလတွေမှာဗိုလ်ကြီးတွေဆီမှာ လာတောင်းပန် ကြတယ်၊ သူတို့က ပေးမလွတ်ဘူး”ဟုမောင်သက်လွင်က ပြောသည်။
မောင်သက်လွင်သည် ယခုလက်ရှိတွင် ဟားခါးမြို့မှ (၂၅)မိုင်ခန့်ဝေးလံသော တလန်ဇား ကျေးရွာအနီးရှိ စစ်တပ် နွားမွေးမြူးရေးခြံတွင် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။
ဖလမ်းမြို.အခြေစိုက် ခလရ(၂၆၈)တပ်ရင်းတွင် အသက်မပြည့်သေးဘဲ စစ်မှုထမ်းဆောင် နေရသူ မောင်သက်လွင်အပါအ၀င် ကလေးစစ် သား(၃)ဦးခန်.ရှိသည်ဟုလည်း သိရသည်။ ထို.အပြင် စစ်တပ်ထဲစ၀င်စဉ်တွင် အသက်မပြည့်သေးသော်လည်း စစ်မှုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ. ပင်အသက်ပြည့်သွားခဲ့ရသူ ကလေးစစ်သားအများအပြား ရှိနေသည်ဟု မောင်သက်လွင်က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းစာချုပ်ကို သဘောတူ ညီခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် CRC စာချုပ်အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။
နိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပဒေအရ အသက်(၁၈)နှစ်အောက်ကလေးသူငယ်များအား တပ်မတော် အတွင်းသို. စုဆောင်းမှုကို တားမြစ်ထားသည်။
ရန်ကုန်မြို.ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ.က မြန်မာနိုင်ငံတွင်တနှစ်အတွင်း ကလေးစစ်သားအယောက် ၁၀၀ ကျော်ကို အုပ်ထိန်းသူမိဘများထံပြန်လည် အပ်နှံနိုင်ခဲ့ သည်ဟုပြောဆိုကြောင်းပြည်တွင်းထုတ် weekly eleven သတင်းဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာနဲ.ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ.ချူပ်၏ မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်လိုက်သောအစီရင်ခံစားထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မြန်မာစစ်တပ် အပါအ၀င်၊ ကရင်နီလက်နက်ကိုင်တပ် Karenni National Progressive Party (KNPP)၊ ကရင် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် Karen National Liberation Army (KNLA) တို့တွင် ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။